प्रबिधिको प्रयोग गरेर यसरी गोरो बनाउछन महिलाहरु आफ्नो योनीलाई ! – Saurahaonline.com
प्रबिधिको प्रयोग गरेर यसरी गोरो बनाउछन महिलाहरु आफ्नो योनीलाई !
काठमाडौँ, ५ जेठ । मानिसहरुलाई यतिबेला अनौठो रुचि जागेको छ । विशेष गरेर पुरुषहरु आफ्नो गुप्ताङ्ग गोरो बनाउन जुटेका छन् ।बिबिसीमा प्रकाशित रिपोर्टका अनुसार एसियाली राष्ट्रहरुमा गोरो बन्ने कोशिस नौलो भने होइन । किनभने यहाँ कालो रंगलाई लिएर अनौठो सोच रहेको छ ।
हालै गुप्ताङ्गलाई गोरो बनाउने बारे प्रक्रिया अनलाइनमा राखेपछि यो केही समयमा नै भाइरल बनेको थियो । यसमा मानिसहरुको क्रेज बढेपछि थाइल्याण्डको स्वास्थ्य मन्त्रालय चेतावनी समेत जारी गरेको छ । यस प्रक्रियामा सहभागी एक पुरुष भन्छन्, ‘म स्वीमिङ ब्रिफ्समा अझै कन्फिडेन्ड महसुस गर्न चाहन्छु ।’
३० वर्षीय यी पुरुषले दुई महिनाअघि यस प्रक्रियाबाट गुज्रेका थिए । उनी भन्छन्, ‘फरक महसुस हुँदैछ ।’
के–का लागि यो ?
यो ट्रिटमेन्ट गर्ने क्लिनकले आफ्नो फेसबुक पेजमा यो पोष्ट राखेपछि दुई दिनमा नै १९ हजार पटक सेयर भएको थियो । यस प्रक्रियामा छालाको मेलानिनको मात्रा कम गरिने बताइएको छ । यस पोष्टमा उपचार कक्षको तस्विर र उपचार अघि र पछिको फरक पनि देखाइएको छ ।
यसबारे मानिसहरुले विभिन्न प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । केहीले यसको आवश्यकताबारे प्रश्न उठाएका छन् । केही भने रमाइलो कमेन्ट पनि गरेका छन्, ‘यसलाई टर्चजस्तै प्रयोग गर्न सकिन्छ । चम्कन दिनुहोस् ।’
एक महिला प्रयोगकर्ताले हैरानी जताउँदै लेखेकी छिन्, ‘हामी रंगभन्दा पनि आकार र प्रयोगबारे बढी चिन्तित छौँ ।’
यो सेवा दिने लेलक्स अस्पतालका मार्केटिङ म्यानेजर पोपोल तंसाकुलले बिबिसीसँग कुरा गर्दै उनीहरुले चार महिनाअघि महिलाहरुको योनाङ्ग गोरो बनाउने सेवा शुरु गरेको बताए । त्यसपछि धेरै पुरुषहरुले यसको बारेमा प्रश्न गरेपछि पुरुषहरुका लागि पनि सेवा शुरु गरिएको उनले जानकारी दिए ।
‘मानिसहरुले पुरुषहरुको गुप्ताङ्ग गोरो बनाउने बारे प्रश्न गर्न थालेपछि एक महिनापछि हामीले पुरुषहरुका लागि पनि सेवा शुरु गर्यौँ,’ उनले भने ।
यसको पूरा खर्च ६५० डलर लाग्ने बताइएको छ । यहाँ हरेक महिना २० देखि ३० जना यो उपचार गराउन आउने गरेका छन् । जसमा म्यान्मार, कम्बोडिया र हङकङका नागरिक पनि रहेका छन् ।
क्लिनिङको चर्चा व्यापक भएपछि थाइल्याण्डको स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसबारे चेतावनी जारी गर्दै यस प्रक्रियामा सहभागी हुनेहरुले पीडादेखि बच्चा पैदा गर्ने र सेक्स गर्न समस्या हुने बताएको छ ।